तपाईलेपनि जान्नैपर्छ मोबाईल सिमाकार्ड बारे आयो नयाँ नियम — newsparda.com
तपाईलेपनि जान्नैपर्छ मोबाईल सिमाकार्ड बारे आयो नयाँ नियम
काठमाडौं । तपाँईले आफ्नो नामबाट कतिवटा सिमकार्ड निकाल्नु भएको छ ? एक, दुई वा त्यो भन्दा धेरै सिमकार्ड निकाल्नु भएको छ ? दुईवटासम्म निकाल्नु भएको छ भने समस्या छैन तर दुई भन्दा धेरै निकाल्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने एकछिन सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अब एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एकै व्यक्तिका नाममा दुईभन्दा बढी सिमकार्ड जारी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले आइतबार यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ । अब कुनै व्यक्तिका नाममा दुई वा सोभन्दा बढी सिमकार्ड जारी भइसकेको छ भने उसले अर्को सिम लिन पाउनेछैन । प्रवक्ता अर्यालले यसअघि जारी भइसकेको सिमकार्डका विषयमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनु भएको छ ।
यसअघि एकै व्यक्तिका नाममा दुईभन्दा बढी सिमकार्ड जारी भएको पाइए त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले छिट्टै सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्ने जानकारी दिइएको छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग दुई वा दुईभन्दा सिमकार्ड लिनेको संख्या कति छ भनेर तथ्यांक माग गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल टेलिकमको हकमा भने एकै व्यक्तिका नाममा तीनवटा सिम जारी गर्न पाइनेछ । टेलिकमको जीएसएम सेवातर्फ दुई वटा सिम र सीडीएम सेवातर्फ थप एक सिम जारी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो । सिमकार्डमा आधारित भएर बैंकिङ कारोबार गरिने भएकाले उपभोक्ताको सुरक्षाका लागि पनि एकै व्यक्तिका नाममा धेरै सिम जारी गर्न नपाइने गरी निर्देशन हो ।सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!